(DAAWO SAWIRADDA) Muhaajiriin Somali ah oo buux dhaafiyay Xabsiyadda Libya – idalenews.com
(DAAWO SAWIRADDA) Muhaajiriin Somali ah oo buux dhaafiyay Xabsiyadda Libya
Wararka ka imaanaya Magaaladda Tripol ee Caasimadda Dalka Libya ayaa sheegaya in Ciiddamadda Ammaanka ee Xeebaha Libya gacanta ku dhigeen Dooni waday ku dhawaad 160 Tahriibayaal isugu jira Somali,Sudan,Ethiopia iyo Ereteria.
Doontii waday Muhaajiriinta, ayaa waxa ay ku dhex halawday gudaha Badda Libya taasi oo dhowr saacadood kadib gargaar ka helay Markab Shidaal oo laga lahaa Dalka Turkiga oo kusii jeeday wadanka Libya.
Ciiddamadda Ammaanka ee Xeebaha Libya ayaa waxa ay Jir dil u geysteen Muhaajiriintii la socday Doonida la qabtay isla markaana Xabsiga dhigay, mid kamid ah Muhaajiriintaasi ayaa shabakadda Soomaalidamaanta u sheegay in gudaha Xabsiga ay ku geeriyooden ku dhawaad 15-Ruux oo u badan Somalia, kuwaasoo uu sheegay inay kamid ahaayeen kuwii lagu soo qabtay Doonida.
Muhaajiriinta Xabsiga buux dhaafiyay ayaa waxa ay baaq udireen Doowlada Somalia iyo Safaaradda Soomaalida Libya, waxa ayna ka codsadeen in loo soo gurmado isla markaana laga saaro Xabsiyadda loona celsho Waddankooda Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, Maxaabiista ku jirta Xabsiyadda Libya ayaa waxa ay Dowladda Somalia ee uu Hoggaanka u hayo Xassan Sheikh ka codsaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan wax uga qabtaan xaaladda ku heysata gudaha Xabsiga.
Dowladda oo xil ka qaadis ku sameysay General Shariif Sheekhuna, soona magacawday Taliye cusub
Madaxweyne Xasan Sheekh oo baarlamaanka u sheegay in shirka London uu yahay mid dalka Soomaaliya lagu kaalmeynayo